ဧဝံဂေလိ ရုပ်ရှင်များ – Page4– အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
December 24, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
လောင်ကျင်းကျုံဟာ တရုတ်ပြည်က အိမ်တွင်းအသင်းတော်တစ်ခုရဲ့ အကြီးအကဲတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အနှစ်သုံးဆယ်ကျော်လောက် ယုံကြည်သူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပြီး “သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင် မှုတ်သွင်းတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်”၊ “သမ္မာကျမ်းစာသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ်၊ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်တာဟာ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းပဲ၊ သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်ခြင်းဟာ ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ခြင်းပဲ” ဆိုတာကို စွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ၊ သမ္မာကျမ်းစာဟာ ပဓာနပါပဲ။ သမ္မာကျမ်းစာအပေါ် သူ့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုနဲ့ မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်မှုတို့ကြောင့်၊ နောက်ဆုံးသောကာလထဲက အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်ကို မရှာဖွေ မလေ့လာခဲ့ဘူး။ တစ်ရက်မှာတော့၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဖတ်နေတဲ့ ယုံကြည်သူတွေကို တားဆီးပိတ်ပင်ခဲ့ရာကနေ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်အသင်းတော်က တရားဟောဆရာတွေနဲ့ ကြုံဆုံဖို့ အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ သမ္မာတရားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အခြေအတင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်၊ သမ္မာကျမ်းစာနဲ့ ဘုရားသခင်ရဲ့ ကြားထဲက ဆက်နွယ်မှုကို သူရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်လာနိုင်မှာလား။ သမ္မာကျမ်းစာကနေ ဖယ်ခွာပြီး ခရစ်တော်ဟာ သမ္မာတရား၊ လမ်းခရီးနဲ့ အသက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူနားလည်နိုင်ခဲ့လား။ ဘုရားသခင့်ရှေ့ကို သူချီဆောင်သွားခြင်းခံရမှာလား။
Myanmar Christian Movie Trailer (မြို့တော် ကျဆုံးလိမ့်မည်) God’s Warning of the Last Days
December 23, 2018 December 23, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
Myanmar Gospel Movie (ပြန်လာခဲ့သူ ဘယ်သူပါလဲ) Christ of the Last Days Has Come
December 21, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
ကင်မ်ယောင်ရို့ခ်ဟာ ကိုရီးယားဘာသာရေးအသိုက်အ၀န်းထဲက ဘာသာရေးကိုင်းရှိုင်းတဲ့ သင်းအုပ်ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ သမ္မာတရားကို ငတ်မွတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူဟာ သခင်ယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းကို မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၃ ခုနှစ် တစ်ရက်မှာတော့၊ သူဟာ ချိုဆန်အီလ်ဘိုသတင်းစာမှာ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကို အမှတ်မထင် ဖတ်လိုက်ရတယ်။ ဩဇာအာဏာနဲ့ တန်ခိုးတော်ပြည့်၀လွန်းနေတဲ့ အဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာ သူ့အပေါ်ကို ချက်ချင်းသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပြီး၊ သူ့ရင်ကို ကိုင်လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားဟာ ပြန်ကြွလာတဲ့ သခင်ယေရှုပဲလား၊ သူ အချိန်အကြာကြီး စောင့်မျှော်ခဲ့တဲ့ ကယ်တင်ရှင်ပဲလားဆိုတာ သေချာစေဖို့အတွက်၊ သူဟာ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနဲ့ အမှုတော်ကို စတင်ရှာဖွေ ဆန်းစစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူ့ရင်ထဲက သံသယတွေ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ပြေလည်သွားတဲ့အခါမှာတော့၊ ကင်မ်ယောင်ရို့ခ်ဟာ ၀မ်းမြောက် စိတ်လှုပ်ရှားလွန်းတာကြောင့်၊ မြေပေါ်မှာ ၀ပ်စင်းလုနီးနီး ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားဟာ နောက်ဆုံးသောကာလအတွက် သခင်ယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာခြင်း ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ကိုယ်တော်ဟာ လူတွေကြားကို တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီး၊ တရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ကို ဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ကနေ စတင်ဆောင်ရွက်နေတာလည်း ကြာခဲ့ပ
Myanmar Gospel Movie Trailer | (မှန်ကန်သော ကိုးကွယ်ခြင်း၏ နက်နဲသောအရာ – နောက်ဆက်တွဲဇာတ်လမ်း)
December 20, 2018 December 20, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
Christianity Movie Trailer(ကျွန်တော့်သခင် ဘယ်သူလဲ) Clarifying the Connection Between the Bible and God
December 16, 2018 December 16, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
myanmar gospel movie (စောင့်လို့နေ) I Have Heard the Voice of the Returned Lord Jesus
December 14, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
ယန်းဟော့ဝေ သည် တရုတ်ပြည်ရှိ အိမ်အသင်းတော်တစ်ခုမှ သင်းအုပ်ဆရာဖြစ်သည်။ သူ့ဖခင်ဖြစ်သူ ယန်းရှောင်းဒို နှင့်အတူ တိမ်တော်ပေါ်မှ ကြွလာမည့် သခင်ယေရှုခရစ်ကို စောင့်ဆိုင်းပြီး ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ဝင်ဖို့ စောင့်နေကြသူများဖြစ်သည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် သခင်ဘုရားအတွက် အလုပ်ကိုဇွဲနပဲနှင့် လုပ်ကြသည်၊ နာမတော်၌ အစာရှောင်ကြပြီး၊ တိမ်ဖြူနှင့် မဆင်းကြွသည့် မည်သူ့ကို မဆို မှားယွင်းသော ခရစ်တော်ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်နေသည်။ နောက်တော့၊ သခင်ဘုရား ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာပြီးပြီ ဆိုသော သတင်းစကားကို ကြားတော့ နားလည်းမထောင် သလို လက်လည်းမခံခဲ့ပါဘူး။ သူတို့ စဉ်းစားတွေးထင်တာက စောင့်ကြည့်၊ စောင့်နေဖို့သာ အကောင်းဆုံးလို့မှတ်ယူကြပါတယ်။ သူတို့တကယ်ပဲ မတက်မကြွစောင့်နေတာကို ဆရာ ယန်းဟော့ဝေရဲ့ ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ လီကျားရင်းက နောက်ဆုံးသောကာလ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်ကို လက်ခံခဲ့တာကြောင့် ၄င်း သတင်းစကားကို သူတို့ထံပြောကြားခဲ့တယ်။ နက်နက်နဲနဲ ဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်မပြီးမကြာခင်မှာပဲ ယန်းဟော့ဝေတစ်ယောက် နောက်ဆုံးတော့ “သတိနဲ့စောင့်ကြည့်စောင့်နေခြင်း” ရဲ့ ဆိုလိုရင်း အမှန်ု ကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ ပြီးတော့ အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ရဲ့စကားတော်များဟာ သမ္မာတရား၊ အသက်၊ လမ်းခရီးဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ ၄င်းစကားတော်များဟာ သခင်ဘုရားရဲ့ အသံတော်ဖြစ်တာ၊ အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်ဟာ ၄င်းတို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ကြွလာမယ့် သခင်ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့မြင်ခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်၏ နိုင်ငံတော်ကို ရှာဖွေလေ့လာခြင်း
Christian Movie 2018 တရုတ်ပြည်မှ ဘာသာရေးဖိစီးနှိပ်စက်မှု ၂ (မိုးမသောက်ခင် မှောင်မိုက်ချိန်)
December 8, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
Since it came to power in mainland China in 1949, the Chinese Communist Party has been unceasing in its persecution of religious faith. It has frantically arrested and murdered Christians, expelled and abused missionaries operating in China, confiscated and destroyed countless copies of the Bible, sealed up and demolished church buildings, and tried to eradicate all house churches. This documentary describes the real experience ofaChinese Christian, Yang Huizhi who was arrested by the CCP government, tortured, and died from her mistreatment because of her belief in God. After Yang Huizhi died, the CCP government falsely claimed that her death had been the result ofaheart attack. Her family wanted to seek justice for her, but were ultimately scared into keeping quiet because of the CCP’s threats.
ရုပ်ရွင္ဇာတ္လမ်းတိုမ်ာ ၅ (နောက္ဆုံးသောကာလမွာ ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင္မှုဟာ အျပစ်ပျေးခင်းလော ကယ္တင်ျခင်းလော)
December 5, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
လူတစ်ချို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖတ်ပြီး လူသားတွေကိုတရားစီရင်ခြင်း ၊ရှုတ်ချခြင်းနဲ့ ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာသင့်စေခြင်းနဲ့ပက်သက်တဲ့ ပြင်းထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့အရာတစ်ချို့ရှိတယ်ထင်ကြတယ်။ သူတို့က လူတွေကို ဘုရားသခင်က တရားစီရင်ပြီး ကျိန်ခြင်းအမင်္ဂလာ သင့်စေမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ ရှုတ်ချခံရပြီးအပြစ်ပေးခံရတာပဲမဟုတ်လားလို့ထင်ကြပါတယ်။ ဒီလို တရားစီရင်ခြင်းမျိုးက လူတွေကို သန့်စင်စေပြီး ကယ်တင်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ ဘယ်လိုပြောလို့ရပါမလဲ။ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကပတ်တော်တွေမှာ””ဘုရားသခင် ကျိန်ဆိုသည့်အရာမှာ လူသား၏ နာခံမှုမရှိခြင်းကို ဖြစ်ပြီး၊ သူစီရင်သည့်အရာမှာ လူသား၏အပြစ် ဖြစ်သည်။”” လို့ မိန့်ဆိုထားပါတယ် “”နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုများသည် သင့်ကို မှန်သောလမ်းသို့ ဦးဆောင်လမ်းပြရန်အတွက်သာ ဖြစ်သည်။”” (နှုတ်ကပတ်တော်သည် လူ့ဇာတိ၌ ပေါ်လာ၏) မှ
ဘယ်အရာဟာ နောက်ဆုံးသောကာလမှာ ဘုရားသခင်ရဲ့စီရင်မှုကိုနားလည်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်မလဲ။
December 4, 2018 December 4, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
အကြံပြုစာမျာ: ဘုရားသခင်ကို သိနားလည်သောလမ်း
Myanmar Gospel Movie (ခြေချင်းများကိုချိုးဖျက်၍ ပြေးပါ) God Is My Strength and My Shepherd
December 3, 2018 kingdomsalvationmyLeaveacomment
လီချွမ်မင်ဟာ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်မြို့မှာရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးက အကြီးအကဲတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်ကာလအထိ၊ သူဟာစိတ်အားထက်သန်စွာ သခင်ကိုအစေခံခဲ့ပြီး၊ သမ္မာကျမ်းစာကို သေသေချာချာပြည့်ပြည့်ဝဝ လေ့လာနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့ပုံသက်သေကို သူဟာလိုက်နာနေသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာ သမ္မာကျမ်းစာကိုယုံကြည်ခြင်းပဲ၊ သမ္မာကျမ်းစာကိုယုံကြည်ခြင်းဟာလည်း သခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲလို့ တွေးထားခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာကိုလက်ကိုင်ထားသရွေ့ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကို ချီဆောင်သွားခြင်းခံရလိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်နေခဲ့တယ်။ ဒီအတွေးအခေါ်တွေဟာ သူ့ကို ခြေချင်းတစ်စုံလိုထိန်းချုပ်ထားခဲ့ပြီး၊ ဘုရားသခင်ရဲ့ ခြေရာကို လိုက်ဖို့နဲ့ ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ဖို့ကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတယ်။ အဲ့ဒီအကျိုးဆက်အနေနဲ့၊ လီချွမ်မင်တစ်​ယောက် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ရဲ့ နောက်ဆုံးသောကာလက အမှုတော်တွေကို စုံစမ်းလေ့လာဖို့တစ်ခါမှမတွေးခဲ့ဘူး။
ဆောင်ရွက်မှုများ သိုးသငယ်၏ ခြေရာနောက်ကို လိုက်မှီခြင်း- အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်